Isa iyo StarCraft II mutambo paLinux nerubatsiro rweWinepak | Linux Vakapindwa muropa
StarCraft II iri yemauto sci-fi chaiyo-nguva zano mutambo, uyu mutambo wevhidhiyo yakagadzirwa neBlizzard Varaidzo studio yeAmerican uye ndiyo nhevedzano yeStarCraft.
StarCraft II yaive yakagadzirirwa kuburitswa mune trilogy fomu, zvitsauko zvekutanga Mapapiro eRusununguko, vakasunungurwa, uye Mwoyo weChaputi uye Nhaka Yeasina yeumwe neumwe wavo ari kutarisa kurudzi rumwe chete.
Yakagadzwa muzana ramakumi maviri nematanhatu mune chikamu chiri kure cheKoprulu, mutambo unotenderera nemhando nhatu: iyo Terran, vanhu vakatapwa kubva pasi; zerg, mhando yehupenyu mafomu anokwenenzvera mamwe akarongeka mumapoka; uye Protoss, mujaho wehunyanzvi hwehunyanzvi ne psionic masimba.
1 Starcraft II nhoroondo
2 Maitiro ekuisa StarCraft II paLinux nerubatsiro rweWinepak?
Starcraft II nhoroondo
Starcraft II: Mapapiro eRusununguko anotanga makore mana mushure mekuguma kweBrood War uye inotaurira zvichaitika kumarudzi matatu anogara muStarCraft zvakasikwa. Iye zvino Jim Raynor mupanduki anorwira Arcturus Mengsk kuti apedze hudzvanyiriri nekutonga.
Iyo nyaya inotanga apo Jim Raynor agere mubhawa uye Tychus Findlay asvika. Iye anokuudza kuti auya kuzoita bhizinesi nezve zvimwe zvigadzirwa zveXel'Naga. Gare gare, kurwisa kweZerg Mar Sara, nedzimwe nyika mushure mekusave muhondo kwenguva yakareba, Jim raynor anotiza muchikepe chake cheHyperion pamwe nechidimbu cheXel'Naga Artifact.
Iye anoenderera mberi nekuunganidza zvigadzirwa pamapuraneti eXel'Naga apo achirwa naMengsk neDominion, asi zvinhu zvakawanda zvisingatarisirike zvinoitika.
En Starcraft II kune zviviri chete zviwanikwa: ore uye vespene gasi. Iko zvakare kune zvakapfuma zvicherwa uye zvakapfuma vespene gasi, asi kune zvekare imwezve zviwanikwa zvinongowanikwa mumushandirapamwe, inova terracino.
Mu StarCraft II, sosi huru ndeye ore, iyo inobvumidza iwe kuti ugadzire zvivakwa uye zvikamu. Hwaro hwesarudzo yakanaka huri mune yakakwana yekuchera zvicherwa. Iyo nyowani nyowani inowedzera yero zvicherwa mari (kana ichienzaniswa neyechinyakare yebhuruu iya). Musiyano uripo ndewekuti kuburitsa kwavo kunokurumidza, asi ivo vari munzvimbo iri panjodzi yekurwiswa nevavengi.
Iyi gasi inowanikwa mumagiza pedyo nemaminera eminda (2 pamunda wega wega). Kuti uibate, chimiro chakakosha chinokwanisa kuchenesa iro gasi chinofanira kusimbiswa pairi, inogona kunge iri iyo Terran Refinery, iyo Zerg Extractor kana iyo Protoss Assimilator. Vespene gasi inoshandiswa kugadzira zvimwe zvikamu zvemberi uye nekuvandudza.
Maitiro ekuisa StarCraft II paLinux nerubatsiro rweWinepak?
Si iwe unoda kuisa uyu mutambo pane linux, Tinogona kuzviita zvakapusa nerubatsiro rweFlatpak tekinoroji.
Nerutsigiro rweizvi uye mafomati matsva eWinepak faira isu tichakwanisa kunakidzwa nemutambo uyu wakanaka tisingashandisi nzira yechinyakare yekumisikidza nekugadzirisa Waini pane edu masisitimu.
Kuti tiite kuiswa isu tinofanirwa kuve nerutsigiro rweFlatpak tekinoroji mumasisitimu edu.
Iye zvino Tinofanira kuvhura terminal uye toteedzera unotevera kuraira pane edu masisitimu:
Maitiro aya anotora chinguva, sezvo uchifanira kurodha pasuru iyo, kana iine huremu hwakati rebei, saka unogona kutora maminetsi mashoma kudhawunirodha nekuisa iyi package.
Pakupera kwekurodha pasi nekumisikidza iyo StarCraft II Winepak, tinogona kuenderera mberi nekutanga mutambo tichitsvaga nzira yayo pfupi mumenu yekushandisa.
Kana iwe ukasakwanisa kuwana mukana, unogona kumhanya nemutambo kubva kuchipatara nemurairo unotevera:
Kekutanga iwe kumhanya mutambo, zvimwe zveWini zvichagadziriswa, pamwe nemutambo, saka kana zvichida kutarisisa iwe unofanirwa kuteedzera rairo dzakaratidzwa pachiratidziri.
Pakupera kwemaitiro aya iwe unozogona kutanga kunakidzwa nemutambo mukuru uyu pane yako system uye gare gare uchikwanisa kuimhanya pasina kumhanyisa setup wizard.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Isa iyo StarCraft II mutambo paLinux nerubatsiro rweWinepak
Ndatenda nechinyorwa, asi
Mufaro wakadii uye nekuodzwa mwoyo kwakadii
Batte.net inopa ERROR yeasina kushanda vhidhiyo madhiraivha muwaini nekufanogadziriswa iyo inofanirwa kugadzirira kudzivirira izvi kukundikana.
Hondo.net yakandishandira dzimwe nguva muwaini asi zvadaro gadziriso inouya uye inomira kuenda.
Ini ndaifunga kuti flatpack yaisazogadzirirwa chete kune akajairika vhidhiyo madhiraivha, Intel AMD neNvidia yemahara uye inezvivakwa - mune yangu Nvidia isina kusununguka muManjaro - asi kuti yaizovandudza hunyengeri apo battle.net yakagadziridzwa, asi Ini ndinoona izvozvo kana neavo.
Uye wanga uri mutambo uyu wakandiita kuti nditenge MS WOS 10 pro rezinesi ye € 10 mushure mekuve mhandara yeMS kubvira XP, saka zvakapetwa kaviri,
Gravit dhizaini - muchinjika-chikuva vector mifananidzo dhizaini dhizaini